Puntland oo beenisey in Soomaaliland heshiis lagashay odayaal reer Puntland ah. – Radio Daljir
Puntland oo beenisey in Soomaaliland heshiis lagashay odayaal reer Puntland ah.
Luulyo 28, 2016 1:48 b 0
Garoowe, July 28 2016–Dowladda Puntland ayaa si rasmi ah u beenisey hadal dhowaan kasoo yeeray maamulka Soomaaliland oo ku saabsanaa in maamulkaasi uu heshiis lagalay odayaal reer Puntland ah.
Wasiirka wasaarada Warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soo cadde ayaa ka hadlay hadal shalay uu sheegay wasiirka warfaafinta Somaliland kasoo ahaa in ay heshiis la gaareen waxgarad kasoo jeeda Puntland.
Maxamuud Xasan Soocadde, waxa uu sheegay in odayaasha ay Soomaaliland muuqaaladooda baahisay xoog muuqaalka looga duubay sida uu hadalka u dhigay.
Dhowaan ayey ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay inay heshiis dhuleed oo ay Soomaaliland ugu biirayaan lagashay beelo dega gobolada Sool iyo Karkaar ee Puntland.